Fiat 500: imininingwane, ukubuyekezwa komnikazi (izithombe)
I-Fiat 500 iyimoto yedolobha elisemnyango wesithathu "A", okuye kwakhiqizwa okuningi kusukela ngo-2007. Ngendlela, amamodeli wokuqala e-500th "Fiat" akhiqizwa isigamu sekhulu leminyaka edlule, kodwa maduzane ukhohliwe ngalolu hlobo. Futhi ngo-2007 umkhiqizi wase-Italy wanquma ukuvuselela le nganekwane. Yini ebonisa i-Fiat 500 entsha? Ukubuyekezwa kwabanikazi nokubuyekezwa kwalo moto - kamuva kusihloko sethu.
Imoto encane inebukeka obungavamile kakhulu, ehlukanisa nakwezinye izincintiswano, isibonelo, uMatiz no-Smart. I-Fiat 500 (isithombe salokhu imoto ongabona ngezansi) kuhlukile kumklamo wangempela, owathi, ngokusho komenzi, uchazwa ngokuthi "isitayela se-Retro esinqandelwe."
Ngempela, abathuthukisi base-Italy bakwazi ukugcina izimpawu ze-Fiat futhi ngesikhathi esifanayo banciphisa i-subcompact.
Ngaphambili, imoto ihlotshiswe ngezibani ezine ezine-symmetrically ezihleliwe. I-radiator grille ayifuni ngokukhethekile ngokumelene nesizinda jikelele semoto: Amapheshana amabili esiliva ahamba eceleni kwezinhlangothi zesibonakaliso. I-bumper nayo ine "amehlo" amancane, okuyizinto ezikhanyayo. Ehlangothini kukhona amasondo amakhulu, okuhambisana nomngcele omude nokukhululeka okwenza imoto ibe ne-aerodynamics. Ngokuvamile, ukuhlelwa nokuklanywa komzimba kwenza i-Fiat 500 ibe imoto enhle kakhulu, eyocaca ngokucacile ngokumelene nobukhulu obukhulu bezinye izimoto futhi isebenze ngokukhawuleza emgwaqeni omkhulu wedolobha.
Ekuphetheni kombuzo wokuklama, ngingathanda ukuphawula ukuthi ama-Italiya aphinde akwazi ukuxazulula umsebenzi ongenakwenzeka - ukudala i-hatchback eyophindaphinda amafomu wezinhlobo zama-50-60s futhi ngesikhathi esifanayo ayibonakali yisikhathi esiphelele emlandweni jikelele wemoto.
Ubukhulu be-Fiat bukhulu kakhulu. Ubude bemoto buyizingamamitha angu-3.5, ububanzi - 1.6 amamitha, futhi ukuphakama akufinyeleli ngisho nezinga le-1.5 metres.
Yebo, ubukhulu be "isiNtaliyane" buyinkimbinkimbi kakhulu, yini esingayisho mayelana nokuvalwa komhlaba, okungama 130 millimitha kuphela. Njengoba kunezici ezengeziwe ezisezingeni eliphansi zedolobha (ngaphandle kwe-autobahns) kule nsizakalo kuyingozi ukuhamba. Ngamanye amazwi, abanikazi be-500th Fiat kuzodingeka bakhohlwe mayelana nokuya emvelweni.
Futhi lapha okuqala okuthakazelisayo kuqala. Uma ekubukeni kwangaphandle kwemoto yase-Italiya befuna ukulondoloza izici ezihlobene "ne-Fiat" yeminyaka yokuqala, ngakho ngaphakathi kwakho konke kubheka kakhulu. Ngokushesha, iphaneli yensimbi eyindilinga iyafika emehlweni (ngendlela, efanayo nayo ikhona eBrithani Mini Cooper), efaka kokubili umshini wokuziphendulela kanye ne-tachometer. Isondo lokushayela lihlome izinkinobho ezihlukahlukene zokulawula, futhi kusukela ku-console yesikhungo ushiya ngokucacile inkinobho yokushintsha. Abahlukumezi, njengomsakazo we-tape yomsakazo wenkampani, bafakwe cishe phezulu phezulu kwephaneli. Ngokuqondene nenhlanganisela yemibala, abaklami be-Italy bakwazi ukuzenzela indawo ehambelana kakhulu futhi ethokomele. Insimbi epulasitiki ebanzi "ngaphansi kwe-aluminium", esukela kumshayeli kuya ohlangothini lwabagibeli, ihambisana ngokomzimba ekubukeni jikelele kwekhamera.
Ngendlela, naphezu kokuthi ukukhathazeka ngokuthi "Fiat" eminyakeni emihlanu engu-5-8 yaqala ukuhlinzeka ukufakwa kwayo kwamakhompiyutha e-auto -board (ngisho nasezigciniwe eziphelele eziyisisekelo), isibonelo se-500th sinqatshelwe lo msizi we-elektroniki.
Ngokuvamile, ukwakheka kwephaneli langaphambili akubonakali likhululiwe "ngezinsimbi nezinsimbi" ezihlukahlukene kanye namanye amathuluzi: i-Fiat salon yenziwe kalula, ngaphandle kwama-pathos nokunethezeka. Kodwa okubaluleke kakhulu - yi-ergonomics, ngoba zonke izilawuli kanye nezinkinobho zibekwe ngendlela elula ngangokunokwenzeka ukuze zisetshenziswe. Umugqa wangaphambili wezihlalo unomqondo ongavamile kulabo abahamba ngezimoto zanamuhla ezihamba ngezimoto. Kodwa ngesikhathi esifanayo, abanikazi bezimoto babika ukuthi kukhona ukusekelwa okuhle kwe-lateral, ngenxa yokuthi umshayeli akashiyi esihlalweni ngokuphenduka okubukhali. Futhi azikho izikhalo mayelana nomthethonqubo lapha. Yiqiniso, ukuze induduzo egcwele ingalimazi ukubeka isikhundla sekholomu yokuqondisa ukuhamba. Noma kunjalo, lokhu akuyona into ephawulekayo yokwehla.
Ikhwalithi yezinto zokuqeda, njengenjalo, isendaweni ephakeme. Okufanayo kusebenza ezakhiweni zokungena ngezwi.
Isihloko esikhethekile sokuxoxisana ukuphakama kwe-salon. Ukubheka ubukhulu be-Fiat, akudingekile ukukhuluma ngakho, kodwa ngisho nomshayeli omude kakhulu uzozizwa ekhululekile ngaphambili. Lokhu kuhlinzekwa ngumklamo ocabangelayo wepaneli yangaphambili kanye nokuhlelwa kwe-cabin jikelele. Iqiniso, isikhala kufanele senziwe emgqeni wezihlalo zangemuva - izingane kuphela ezizizwa zikhululekile lapha. Umuntu omdala ngemuva angeke akhululeke kakhulu ukuhlala (nakuba umkhiqizi ethi imoto ingakwazi ukuhlala kwabagibeli abane). Small "Cooper" bese unekhala elingaphezulu.
Konke okunye nokuklama kwangaphakathi ama-Italiya ahlangene nezinhlanu eziqinile. Futhi ngokuphathelene nenduduzo, akukho ukuphikisa.
"Fiat 500". Ukucaciswa kobuchwepheshe
Ngokuqondene nezici zobuchwepheshe, i-hatchback yase-Italiya emakethe yaseRussia inikezwa ngezihumusho ezimbili. Emgqeni wezitshalo zamandla kuneziteli ezimbili ezine-cylinder units. Phakathi kwabo, "junior" elinomsebenzi osebenza ngamalitha angu-1.2 uqala amandla angama-69 amahhashi. Ekuboneni kokuqala, le mandla ingase ingabonakali ngokwanele, kodwa uma ucabangela ukulinganisa kwemoto yemoto, engaphansi kweetoni elilodwa (okungu-865 kilogram), konke kuhamba endaweni. I- injini yesibili yephethiloli, enezinga layo lokusebenza lama-1.4 amalitha, likhula ngamahhashi angu-100 ku-6,000 rpm. Zombili izitshalo zamandla zisezingeni eliphezulu kakhulu, ngakho-ke imoto ingaziqhayisa izici ezinhle. Ngokwezinga lezinyosi, zihambisana nesilinganiso se-Euro 5.
Ngomkhakha wephethiloli ka-1.2-litre, imoto ye-Fiat 500 ithola "ikhulu" emasekhondini angu-12. Ngesikhathi esifanayo, isivinini sayo esiphezulu sikhilomitha angu-160 ngehora. Ngenjini enamandla kakhulu, i-100-horse-power injini, u-Fiat uzizwa eqiniseka kakhulu emgwaqeni: ama-"hundred" adida ngamasekhondi angu-10.5. "Maxima" ngesikhathi esifanayo ngu-182 amakhilomitha ngehora. Akukubi, ngokuqondene nokusebenza okunjalo kwedolobha.
Mayelana nokudluliselwa, umthengi waseRashiya angakhetha kusuka ebhokisini lamagesi amabili. Phakathi kwabo, omunye unomshini ngezigaba ezingu-5 futhi i-automaton enezivinini ezingu-6. Futhi lokhu kungenziwa kuphela efakwe injini engu-1.2-litre. I-"-atmospheric" ene-100-eqinile inamashini amahlanu kuphela. Ngokuzikhethela, umdayisi unikeza ukufakwa kwebhodi yebhodi ye-gebotic eyi-5 .
Ukusetshenziswa kwamafutha kaFiat, kufana nobukhulu bawo, bukhulu kakhulu. Ngakho-ke, ngamakhilomitha angu-100 kwimodi ehlanganisiwe, imoto idlulisa cishe ama-litha angu-5.1 (injini engu-1.2-litre). Iyunithi enamandla kakhulu idla okungenani amalitha angu-6 nge "amakhulu" kwimodi ehlangene. Umthamo we-tank fuel u-35 amalitha kuphela, kodwa, njengemikhonyovu, ukugcwalisa okuphelele kwe-Fiat okungenani amakhilomitha angu-450 kuya ku-5 500 ubude.
Fiat 500: intengo
Intengo yokuqala ye-hatchback encane ngo-2014 iqala emakethe angu-552 ayi-ruble. Ngalokhu intengo inikezwa isethi ephelele nge-1.2-litre injini kanye nokuthunyelwa kwebhuku. Ngoba umshini uzokhokha amanye ama-ruble ayizinkulungwane ezingu-43. Iqoqo eliphelele elinama-1.4-litre amandla plant lizotholakala ngentengo yama-ruble angu-665 ayizinkulungwane. Kulesi simo, umthengisi unikeza izinketho eziningi kanye nemishini eyengeziwe yemodeli ngayinye ye-Fiat.
Yiziphi izinketho ezifakiwe ku-hatchback yokuqala yokuthenga?
Kumele kuqashelwe ukuthi imishini eyisisekelo ye-Fiat 500 isivele ihlanganisa umsakazo we CD / MP3 ophethe izikhulumi eziyisithupha, isikhumba sesikhumba, iphakethe le-Comfort, uhlelo lwe-Blutuz ngokubona okuzenzakalelayo kwezwi, ukushisa kwefasitela yangemuva, immobilizer, ngaphambili nangemuva eminingana Ama-airbags angaphandle, uhlelo oluphuthumayo lwe-braking, i-ABS, i-EBD, kanye nezinye izinto eziningi eziwusizo.
Kuyiqiniso, kukhona i-drawback yase-Italiya neyodwa enkulu - isimo se-air conditioner sishoda kokubili esisekelweni nasemishini ephezulu. Futhi ngisho njengendlela yokukhetha, akuhlinzekiwe ngumenzi. Ezinsukwini ezishisayo, ezishisayo, indlela kuphela yokuphuma ukuhamba nazo zonke amawindi avulekile.
I-Fiat 500 iyimoto enhle kakhulu ekuhambeni kwedolobha namagogacities amakhulu. Ngaphandle kunombukiso obuhle kakhulu futhi obucacile, ngaphakathi kuyo buhle kakhulu, futhi ngenxa yenduduzo kungaphazamisa noma yikuphi "Matiz" noma ngisho nomncintiswano wayo omkhulu - iNissan-Mikra. Ngeshwa, izindleko zalo ngumyalo wokuphakama ophakeme kunokwesekwa okuphansi kwalesi simoto eRussia nakwamanye amazwe e-CIS. Nakuba imoto yesibili yomndeni, i-500th Fiat iyindlela yokukhetha. Kungakhathaliseki ukuthi kwakunjani, kodwa le modeli ibalulekile ukunakekelwa okusondelene kakhulu, kufanele kubhekwe. Futhi ukutadisha ulwazi lwemithombo yezihloko ezihambelanayo. Ngokuvamile, njengokukhangisa okujwayelekile: "Fiat 500" - izibuyekezo zabanikazi zikhuluma ngokwabo!
Popular izivakashi izindawo eRussia
Lamadolobha amakhulu by labantu waseRussia
Isikhova Ural: incazelo, okuqukethwe, izikhova yokudla
IsiShayina iPhone: Izibuyekezo ikhasimende
Izikhombo: Izidingo jikelele kanye nemithetho, izibonelo. Indlela yokwenza ukubhekisela lwempilo? Okubhekwayo Okuhlelekile - lokhu ...